Banijya News | » ओली सरकार गिराउने मास्टर प्लानः सामेल हुनेहरु आआफ्नै मोर्चा कस्दै ओली सरकार गिराउने मास्टर प्लानः सामेल हुनेहरु आआफ्नै मोर्चा कस्दै – Banijya News
ओली सरकार गिराउने मास्टर प्लानः सामेल हुनेहरु आआफ्नै मोर्चा कस्दै
फागुन ०७, काठमाडौं ।
गृह जिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै क्षेत्रका जनता सामु उभिएर भने–‘सरकार गिराउने खेल शुरु भएको भन्ने सुनको छु, म त्यस्ता प्रतिकृयाबाढीलाई परास्त गरेरै छाड्छु ।’
मौजुदा सरकार ढाल्नु पर्ने कारण केही नभएको समय प्रधानमन्त्री नै स्वम आफ्ना भोटर सामु किन यस्तो भाषण गर्दे हिडदैछन् ? अर्कोतर्फ कुनै गम्भीर बिषयका लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलको समय पनि भएको छैन । नत्र किन प्रम ओली आफैले सरकार चलाएको दुई बर्ष पूरा गरेको हप्ता दिन समेत नवित्दै आफ्नै विरुद्ध चर्को भाषण गरे ?
कारण खोज्दै जाँदा बहुमतको सरकार गिराउँने र नयाँ समिकरणका साथ नयाँ सरकार बनाउने खेल भित्र भित्रै भुसको आगो सल्केझंै सल्किरहेको छ । सरकार गिराउँन अरु कोही नभएर सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेता लागि परेको नेकपा सम्बद्ध स्रोतले खुलासा गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत आफ्नै सरकारको काम गर्ने शैली प्रति सन्तृष्ट छैनन् । उनी आफै आफूले प्रधानमन्त्री नपाउनेमा विस्वत त छदैछन ओली सरकारले जनताको मन जित्न समेत नकस्ने उनको निष्कर्ष छ । उनी असन्तुष्ट भएकै समय उनकै लाइनका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा नयाँ सरकारको बिकल्प खोज्न लागि परेका छन् । यो समुहले आफ्नै पाटीको सरकारको विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताबको भित्र भित्रै तयारी गरेको छ । गणितिय हसिावमा शार्माको पक्षमा २१ सभासद रहेका छन् । जुन समुह भित्र भित्रै सरकारको विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्दे आएको छ । जनार्दन यस्ता पात्र हुन उनले पूर्व माओवादी र एमाले मिलाउन विष्णु पौडेल, शाक्ति बस्नेत सितको समिकरणमा नयाँ मोर्चा बनाउँदै दुबै पाटीलाई एक बनाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए । यतिखेर तिनै जनार्दन सत्ता समिकरणको लागि नयाँ मोर्चाको तयारीमा जुटेका छन् । उनलाई नेकपाकै उपाध्यक्ष भिम रावलले साथ दिने पक्का भएको नेकपा उच्च स्रोतले दाबी छ । स्रोतका अनुसार रावलसित १२ सदस्य रहेका छन् । रावल पाटीका अर्को नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा भित्र भित्रै लागि परेका छन् । रावल र शर्माको समिकरण काग्रेस सित समेत छलफलमा बसिसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्द–‘यो समुह काग्रेश लगायत अन्य दलका शिर्ष नेतासित समेत छलफलमा बसिसकेको छ ।’ स्रोत अगाडि थप्छ–‘यस्तै अवस्था रहे ओली सरकारको नयाँ विकल्प चाँडै खडा हुने छ ।’
दुई तिहाई ओली नेतृत्वको सरकार निमार्ण भएको दुई पुगे तगत्तै काग्रेस बृत्तमा समेत सकरको नयाँ बिकल्पको बारेमा बहस हुन थालेको छ । सरकार सभापति शेरवहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई अख्तियारको माध्यमद्धारा भष्ट्राचार मुद्धा हालेर तर्साउन खोजेको समय देउवा आफै सरकारको नयाँ विकल्प खोज्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनले पाटीको केही प्रभावशाली नेतालाई समेत यस्को बिकल्प खोज्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाली शंशाक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य तथा भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, एक मात्र महिला नलिनी ज्ञवालीसहितका १० जना नेपाली काग्रेसका लिडर भारत पुगेका छन् । यो समुहले भारतका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ सित भटेर सरकारको विकल्पमा छलफल गरेको खुल्न आएको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथलाई भेटेर नेपालको बारेमा अबगत गराएको दाबी स्रोतको छ ।
विशेषगरी नेपालमा बंगलादेश मोडलको कम्युनिष्ट सरकारको आवरणबाट शुरु भएर चीनियाँ पद्धतिको एकतन्त्रिय शासन तीर ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको नेपालमा नयाँ चिराबाट राजनीतिक समिकरण खोज्नु पर्ने पक्षमा भारतीय नेतासित छलफल गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ मूलुकको ७० औं प्रजातन्त्र मानाई रहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिखेर दिल्लीमा छन् । उनी पनि नेपालमा राजनैतिक उलथपुथलको संकेत पाएर नै भारत लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनी दिल्ली जानुको पछाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प भारत आउँनु पनि एक हो । उनी भारतमा रहँदा भारत र चीनलाई प्रभाव पार्न सक्ने मिलेनियम च्यालेज्न कम्प्याक्ट (एमसिसि)को केश पास गराउँने पक्षमा हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसित मिलेर केही परिवर्तन नेपालमा पनि खोज्ने पक्का छ । त्यो भएमा नयाँ समिकरण पनि बन्न सक्ने विश्लेषकको दाबी समेत छ । नेपाली राजनीतिको पर्दा अगाडि सरकार गिराउने र टिकाउने खेल हुँदैछ तर पर्दा पछाडि अर्कै भयानक खेल समेत भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसभित्र अन्य परिवर्तन नभएपनि एमसिसि पासको सम्भावना भने बढेर गएको छ ।
झलक्क हेर्दा असम्भव झैँ लाग्ने एउटा डरलाग्दो खेलले नेपाली राजनीतिमा टाउको उठाउन थालेको छ । सो खेलअनुसार नेपालमा राजतन्त्र फर्कने त छैन् तर यस्ले सत्तामा नयाँ तरङग भने ल्याउने पक्का छ । त्यो तरङगमा नयाँ सत्ता समिकरणको झझल्को देखिन थालेको छ । नयाँ सत्ता समिकरणको प्रयास भएको सुइको पाएको ओली सरकार भने कुनै पनि हालतमा नयाँ समिकरण ध्यवस्त बनाउँने त्यो पनि नसके देखि अन्तिम विकल्प मध्यावधी चुनाबमा जाने निप्कर्षमा पुगेको नेकपा सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।